နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းနှုန်းငွေကြေးပြောင်းလဲကိရိယာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းနှုန်းငွေကြေးပြောင်းလဲကိရိယာ
နိုင်ငံခြားရေးလဲလှယ်ငွေကြေး converter ကို tool ကို – ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားငွေကြေး converter ကို tools များ – အခမဲ့ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်း – အားလုံးအဓိကငွေကြေးများအတွက်ငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်း tools များ.
ဤဖောက်သည်ပျော်မွေ့တိုက်ရိုက်နိုင်ငံခြားရေးငွေကြေးလဲလှယ်ရေးနှုန်း built converter, သငျသညျပြောင်းပြန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှု၏ညှနျကွားပြောင်းလဲနိုင်သည် 1 ဦးတည်ချက်.
တက်ကြွကျွန်းအင်ဒိုရာအမေရိကန်ဆာမိုအာသြစတြီးယားသြစတြေးလျအော်လန်ကျွန်းစုဘယ်လ်ဂျီယံဘူလ်ဂေးရီးယားစိန့်ဘာသယ်လဲမီBonaire, စိန့် Eustatius ထိုအဆာဘရာဇီးဘူတန်ဘူးဗက်ကျွန်းကနေဒါကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများဆွစ်ဇာလန်ကွတ်ကျွန်းစုတရုတ်နိုင်ငံClipperton ကျွန်းခရစ္စမတ်ကျွန်းဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဂျာမနီဒီယေဂို Garcia ကဒိန်းမတ်ဆျူးတာ, Mulillaအီကွေဒေါနိုင်ငံအက်စ်တိုးနီးယားစပိန်ဥရောပသမဂ္ဂဖင်လန်Micronesia, အဖွဲ့ချုပ်စတိတ်ဖရိုးကျွန်းစုပြင်သစ်ပြင်သစ်, မြို့တော်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပြင်သစ်ဂီယာနာဂါဇီးဂရင်းလန်းGuadeloupeဂရိနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစုဂူအမ်ကျွန်းဟောင်ကောင်Heard ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများခရိုအေးရှားဟန်ဂေရီနေရီကျွန်းစုအင်ဒိုနီးရှားအိုင်ယာလန်ဣသရလေမမ်းကျွန်းအိန္ဒိယဗြိတိန်ကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုအိုက်စလန်အီတလီဂျာစီဂျပန်ကီရီဘာတီကိုရီးယား, ၏သမ္မတနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်လတ်ဗီးယားမိုနာကိုမွန်တီနီဂရိုးစိန့်မာတင်မာရှယ်ကျွန်းစုမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းစုမာတီနစ်မော်လ်တာမက္ကစီကိုမလေးရှား-Norfolk ကျွန်းနယ်သာလန်နော်ဝေNauru ကျွန်းနီယူးနယူးဇီလန်ဖိလစ်ပိုင်ပိုလန်စိန့် Pierre ၏ထိုအမီကွီလွန်Pitcairn-Puerto Ricoပေါ်တူဂီပလောင်းပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်းရိုမေးနီးယားရုရှားပြည်ထောင်စုဆွီဒင်စင်္ကာပူဆလိုဗေးနီးSvalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayenဆလိုဗက်ကီးဆန်မာရီနိုရုရှားနိုင်ငံအယ်လ်ဆာဗေးဒေါထရစ်စက de Cunhaတူရကီနှင့်ကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေထိုင်းနိုင်ငံTokelau အဘိဓါန်အရှေ့တီမော, ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံကြက်ဆင်Tuvalu အဘိဓါန်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပကျွန်းများယူနိုက်တက်စတိတ်ဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ်Virgin Islands (ဗြိတိန်)Virgin Islands (အမေရိကန်)ကိုဆိုဗိုမာယော့တ်တောင်အာဖရိကဇင်ဘာဘွေ
2021-03-04 07:01:39 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
နိုင်ငံခြားသုံးငွေငွေကြေးကူးပြောင်းခြင်း Tools များ
ဤသည်ငွေကြေး converter ကို tool ကို default အနေဖြင့်ဤလောကတှငျနှစျယောကျကိုအဓိကငွေကြေးအဖြစ်ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်, အမေရိကန်ဒေါ်လာမှ EUR, သင်မူကားစာရင်းကိုပိုပြီးနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုငွေကြေးချတစ်စက်ကနေကောက်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်.
ငွေကြေး Converter: EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Cryptocurrencies Converter Tool ကို
Cryptocurrencies ကတည်းကတည်ရှိ 2009, အချို့လူများကယုံကြည်နှငျ့အခြို့ကိုမကျင့်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲမှန်ပါလိမ့်မယ်ထင်, သငျသညျ cryptocurrencies ဖို့အဓိကနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုငွေကြေးနှင့်၎င်းတို့၏ငွေကြေးကိုကွဲပြားခြားနားမှုပြောင်းဖို့ option ကိုပေးစေခြင်းငှါ.
ငွေကြေး Converter: BTC / EUR
ဒါကကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား Support ပြောင်းစေရန် Worldwide မှနိုင်ငံများနှင့်ငွေကြေးစာရင်း
အောက်ဖော်ပြပါငွေကြေးစာရင်းကို A မှ Z အစဉ်အလိုက်စီသည်, ဒါကြောင့်သင်သွားတဲ့အခါသင်ပြောင်းချင်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ပြောင်းသုံးချင်တဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေကိုရှာနိုင်တယ်.
နိုင်ငံသို့မဟုတ်နယ်မြေတွေကို ငွေကြေးစနစ် အထိမ်းအမှတ်
အာဖဂန်နစ္စတန် အာဖဂန်အာဖဂန် AFN
အယ်လ်ဘေးနီးယား Albanian lek အားလုံး
အယ်လ်ဂျီးရီးယား အယ်လ်ဂျီးရီးယား dinar DZD
အင်ဒိုရာ ဗိုလ်မှူးငွေကြေးကို အီးယူအာရ်
အင်ဂိုလာ အင်ဂိုလာ kwanza AOA
ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ ကာရစ်ဘီယံအရှေ့ဒေါ်လာစျေး XCD
အာဂျင်တီးနား အာဂျင်တီးနားပီဆို ARS
အာေမးနီးယား Armenian အဘိဓါန် DRAM AMD ၏
အယူးဘား Aruban florin AWG
သြစတြေးလျ သြစတြေးလျဒေါ်လာ AUD
သြစတြီးယား ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
အဇာဘိုင်ဂျန် အဇာဘိုင်ဂျန် manat £
ဘဟားမား Bahamian ဒေါ်လာစျေး BSD
ဘာရိန်း ဘာရိန်း dinar Bhd
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကစား BDT
ဘာဘေးဒိုးစ Barbadian ဒေါ်လာစျေး BBD
ဘယ်လာရုစ် ဘီလာရုရူဘယ် BYN
ဘယ်လ်ဂျီယံ ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ဘေလီဇ် ဘေလီဇ်ဒေါ်လာ BZD
ဘီနင် အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် inr
ဘာမြူဒါ Bermudian ဒေါ်လာစျေး BMD
ဘူတန် ဘူတန် ngultrum BTN
ဘိုလီးဗီးယား ဘိုလီးဗီးယား boliviano Bob
ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားအမှတ်အသား Bam
ဘော့ဆွာနာ ဘော့ဆွာနာ pula BWP
ဘရာဇီး ဘရာဇီးအစစ်အမှန် BRL
British Virgin Islands ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဘရူနိုင်း ဘရူနိုင်းဒေါ်လာ BND
ဘူလ်ဂေးရီးယား ဘူဂေးရီးယား lev BGN
Burkina Faso အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် inr
ဘူရွန်ဒီ ဘူရွန်ဒီဖရန့် BIF
ကိပ်ဗာဒီ ကိတ်ဗာဒီအန် escudo CVE
ကမ္ဘောဒီးယား ကမ္ဘောဒီးယား riel KHR
ကင်မရွန်း ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် XAF
ကနေဒါ ကနေဒါဒေါ်လာ CAD
ကေမန်ကျွန်းစု ကေမန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ KYD
ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် XAF
ချဒ် ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် XAF
ချီလီ ချီလီပီဆို CLP
တရုတ်နိုင်ငံ တရုတ်ယွမ်စွက်ဖက် တရုတ်ယွမ်ငွေ
ကိုလံဘီယာ ကိုလံဘီယာပီဆို ရဲ
ကော်မ္မရိုဇ့် Comorian ဖရန့် KMF
ကွတ်ကျွန်းစု ကွတ်ကျွန်းစုဒေါ်လာ အဘယ်သူအားမျှ
ကော့စတာရီ ကိုစ်တာရီကန်အူမကြီး စီအာစီ
ခရိုအေးရှား အဲဒီမှာ Croatian HRK
ကျူးဘား ကျူးဘားပီဆို CUP
ရူရာ နယ်သာလန် Antillean guilder THE
ဆိုက်ပရပ်စ် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
Czechia ခကျြခကျြ koruna CZK
ဒိန်းမတ် ဒိန်းမတ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကို DKK
ဂျီဘူတီနိုင်ငံ Djiboutian ဖရန့် DJF
ဒိုမီနီ ကာရစ်ဘီယံအရှေ့ဒေါ်လာစျေး XCD
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ဒိုမီနီကန်ပီဆို DOP
အီကွေဒေါနိုင်ငံ ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အဲဂုတ္တုပြည်၌ အီဂျစ်ပေါင် EGP
အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် XAF
အီရီထရီးယား အီရီထရီးယား nakfa ERN
အက်စ်တိုးနီးယား ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ဆွာဇီလန်ဆွာဇီလန် Swazi lilangeni SZL
အီသီယိုးပီး အဲသယောပိ birr ETB
ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု ဖောက်ကလန်ကျွန်းစုပေါင် FKP
ဖရိုးကျွန်းစု ဖာရို krona အဘယ်သူအားမျှ
ဖီဂျီ ဖီဒေါ်လာစျေး FJD
ဖင်လန် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ပြင်သစ် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ပြင်သစ်ဂီယာနာ ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား CFP ဖရန့် XPF
ဂါဘွန် ဗဟိုအာဖရိက CFA ဖရန့် XAF
ဂမ်ဘီယာ Gambian dalasi GMD
ဂျော်ဂျီယာ ဂျြောဂြီယနျပြေး gel
ဂျာမနီ ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ဂါနာ ဂါနာလူမျိုး cedi GHS
ဂျီဘရောလ် ဂျီဘရောလ်ပေါင် GIP
ဂရိနိုင်ငံ ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ဂရင်းလန်း ဒိန်းမတ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကို DKK
နေးဒါ ကာရစ်ဘီယံအရှေ့ဒေါ်လာစျေး XCD
Guadeloupe ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ဂူအမ်ကျွန်း ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဂွာတီမာလာ ဂွာတီမာလာ quetzal GTQ
ဂါဇီး ဂါဇီးပေါင် GGP
ဂီနီ ဂီနီဖရန့် GNF
ဂီနီဘစ် အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် inr
ဂိုင်ယာနာ Guyanese ဒေါ်လာစျေး GYD
ဟေတီ Haitian သခွားသီး HTG
ဟွန်ဒူးရပ်စ် ဟွန်ဒူးရပ်စ် lempira HNL
ဟောင်ကောင် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ HKD
ဟန်ဂေရီ ဟနျဂရေီ forint HUF
အိုက်စလန် Icelandic krona ISK
အိန္ဒိယ အိန္ဒိယရူပီး INR
အင်ဒိုနီးရှား အင်ဒိုနီးရှားရူပီယာ IDR
အီရန် အီရန် rial IRR
အီရတ် အီရတ် dinar IQD
အိုင်ယာလန် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
က Man ၏ကျွန်း အဘိဓါန် Manx- ပေါင် ကို IMP
ဣသရလေ အစ္စရေးသစ်ကိုကျပ် သူတို့
အီတလီ ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ဂျမေကာ ဂျမေကာဒေါ်လာစျေး JMD
ဂျပန် ဂျပန်ယန်း ဂျေပီဝိုင်
ဂျာစီကျွန်း ဂျာစီပေါင် JEP
ယော်ဒန်မြစ် ဂျော်ဒန် dinar JOD
ကာဇက်စတန် ကာဇက်စတန် Teng KZT
ကင်ညာ ကင်ညာခှ WHO က
ကိုဆိုဗို ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ကူဝိတ် ကူဝိတ် dinar KWD
ကာဂျစ္စတန် ငါ Kyrgyzstani ကီလို
လာအိုနိုင်ငံ လာအိုကြက်သား Lak
လတ်ဗီးယား ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
လေဗနုန်တော လက်ဘနွန်ပေါင် LBP
လီဆိုသို လီဆိုသို Loti LSL
လိုင်ဘေးရီးယား လိုက်ဘေးရီးယားဒေါ်လာ LRD
လစ်ဗျား လစ်ဗျား dinar အသံ
လီချင်စတိန်း ဆွစ်ဖရန့် CHF
လစ်သူ ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
လူဇင်ဘတ် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
မကာအို Macanese အဘိဓါန် pataca ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်
ဒါဂတ်စကာ အာလာဂါစီ ariary THE
မာလာဝီ မာလာဝီ kwacha MWK
မလေးရှား မလေးရှားရင်းဂစ် MYR
မော်လ်ဒိုက် Maldivian rufiyaa MVR
မာလီ အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် inr
မော်လ်တာ ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
မာရှယ်ကျွန်းစု ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ
မာတီနစ် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
Mauritania Mauritanian ouguiya MRU လို့ရေးပြီး
မောရစ်ရှ Mauritian ရူပီး WALL
မာယော့တ် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
မက္ကစီကို မက္ကဆီကန်ပီဆို MXN
Micronesia ဗိုလ်မှူးငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ
မော်လ်ဒိုဗာ မော်လ်ဒိုဗာ leu MDL
မိုနာကို ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
မွန်ဂိုလီးယား လီး tugrik mnt
မွန်တီနီဂရိုး ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
မော်ရိုကို အဘိဓါန် Moroccan dirham MAD
မိုဇမ်ဘစ် မိုဇမ်ဘစ် metical MZN
မြန်မာ မြန်မာကျပ်ငွေ ကျပ်
နမီးဘီးယား နမ်မီးဘီးယားဒေါ်လာစျေး NAD +
Nauru ကျွန်း သြစတြေးလျဒေါ်လာ AUD
နီပေါ နီပေါရူပီး က NPR
နယ်သာလန် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား CFP ဖရန့် XPF
နယူးဇီလန် နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ NZD
နီကာရာဂွာ နီကာရာဂွါ Cordoba NIO
နိုင်ဂျာ အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် inr
နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ဂျီးရီးယား naira NGN
မြောက်ကိုရီးယား မြောက်ကိုရီးယားဝမ် KPW
စီဒိုနီယံ denar MKD
နော်ဝေ နော်ဝေပန်းဦးရစ်သရဖူကို လုံလောက်စွာ
အိုမန် ကလည်းအိုမန် Rial OMR
ပါကစ္စတန် ပါကစ္စတန်ရူပီး မလေးရှား
ပလောင်း ဗိုလ်မှူးငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ပါလက်စတိုင်း အစ္စရေးသစ်ကိုကျပ် သူတို့
ပနားမား ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ ပါပူဝါနယူးဂီနီ kina PGK
ပါရာဂွေး Paraguayan Guaraní PYG
ပီရူး ပီရူး sol PEN
ဖိလစ်ပိုင် ဖိလစ်ပိုင်ပီဆိုရုပ်ပုံလွှာ PHP ကို
ပိုလန် ပိုလနျ zloty & ယူရို PLN
ပေါ်တူဂီ ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
Puerto Rico ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ကာတာနိုင်ငံ ကာတာ riyal QAR
ပြန်လည်ပူးပေါင်းခြင်း ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ရိုမေးနီးယား ရိုမေးနီးယား leu RON
ရုရှားနိုင်ငံ ရုရှားရူဘယ် RUB
ရဝမ်ဒါ ရဝမ်ဒါဖရန့် RWF
ဆာမိုအာ Samoan အဘိဓါန် Tala WST
ဆန်မာရီနို ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
စဝ်တုန်နှင့်ပရ စဝ်တုန်နှင့်ပရကောင်းသော STN
ဆော်ဒီအာရေဗျ ဆော်ဒီအာရေဗျ Riyal SAR
ဆီနီဂေါ အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် inr
ဆားဘီးယား ဆားဗီး dinar RSD
seychelles Seychellois ရူပီး SCR
ဆီယာရာလီယွန် Sierra Leonean Leone SLL
စင်္ကာပူ စင်္ကာပူဒေါ်လာ စင်ကာပူငွေနှင့်ပြရန်
ဆလိုဗက်ကီး ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ဆလိုဗေးနီး ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ဆော်လမွန်ကျွန်းစုဒေါ်လာ SBD
ဆိုမာလီယာ ဆိုမာလီခှ အရေးပေါ်
တောင်အာဖရိက တောင်အာဖရိကကျပန်း Zar
တောင်ပိုင်းဂျော်ဂျီယာကျွန်း ပေါင်စတာလင် ဂျီဘီပီ
တောင်ကိုရီးယား တောင်ကိုရီးယားဝမ် ဝမ်
တောင်ဆူဒန် ဆူဒန်တောင်ပိုင်းပေါင် ssp
စပိန် ဥရောပယူရိုငွေ အီးယူအာရ်
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ သီရိလင်္ကာရူပီး LKR
ဆူဒန် ဆူဒန်ပေါင် SDG
ဆူရာနမ် Surinamese ဒေါ်လာစျေး SRD
ဆွီဒင် ဆွီဒင်ခရိုနာ SEC
ဆွစ်ဇာလန် ဆွစ်ဖရန့် CHF
ဆီးရီးယား ဆီးရီးယားပေါင် SYP
ထိုင်ဝမ် နယူးထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာ TWD
တန်ဇန်းနီးယား တန်ဇန်းနီးယားခှ TZS
ထိုင်းနိုင်ငံ ထိုင်းဘတ်ငွေ THB
အရှေ့တီမော ဗိုလ်မှူးငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ
သွားရန် အနောက်အာဖရိက CFA ဖရန့် inr
Tokelau အဘိဓါန် (နယူးဇီလန်) နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ NZD
Tonga တှနျဂါ pa'anga TOP
ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုဒေါ်လာစျေး TTD
တူနီးရှား တူနီးရှား dinar TND
ကြက်ဆင် တူရကီလိုင်ရာ စမ်းကြည့်ပါ
တာ့ခ်မင်နစ္စတန် တခ်မ manat TMT
တူရကီနှင့်ကိုင်းကော့စ်ကျွန်းများ ဗိုလ်မှူးငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Tuvalu အဘိဓါန် သြစတြေးလျဒေါ်လာ AUD
ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ယူဂန်ဒါခှ UGX
ယူကရိန်း ယူကရိန်း hryvnia uah
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ယူအေအီး dirham AED
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ပေါင်စတာလင် ဂျီဘီပီ
အမေရိကန်ြပည်ထောင်စု ယူနိုက်တက်စတိတ်ဒေါ်လာစျေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ဥရုဂွေး ဥရုဂွေးပီဆို Firetrucks
ဥဇဘက် ငါ Uzbekistani UZS
ဗာနူအာ ဗာနူအာ vatu VUV
ဗင်နီဇွဲလား ဗင်နီဇွဲလား Bolivar VES
ဗီယက်နမ် ဗီယက်နမ်ဒေါင် VND
ကျွန်းနိုး (ယူအက်စ်အေ) ဗိုလ်မှူးငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ
Wallis နှင့် Futuna- CFP ဖရန့် XPF
ယီမင် ယီမင် rial PLACE သို့
ဇမ်ဘီယာ ဇမျဘီယာ kwacha ZMW
ဇင်ဘာဘွေ ဗိုလ်မှူးငွေကြေးကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအမြဲခရီးသွားများအတွက်နှင့်ရထားခရီးသွားများအတွက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်, ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့အခမဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုငွေကြေး converter ကို tool ကိုပေးစေခြင်းငှါဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, သင်သည်အခြားငွေကြေး converter ကို tool ကိုရှာနေအချိန်ဖြုန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဒါ, ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်းသည်အဘယ်အရာစဉ်းစား, သငျသညျရထားသွားလာသည့်အခါ, သငျသညျသွားလေရာရာ၌.
သငျသညျသွားလာရသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကြေး converter ကို tool ကိုသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမယ့်လည်းယေဘုယျအားအဆိုတင်သွင်းရုံများအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး tool ကိုအဲဒီမှာအားလုံးအဓိကငွေကြေးနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းထားများမှာပါဝင်သည်, ထိုကဲ့သို့သော EUR အဖြစ်, အမေရိကန်ဒေါ်လာ, ဂျီဘီပီ, ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့ရှိသမျှသည်အဓိက cryptocurrencies စကားပြောဆိုချက်တွေကိုရှိသည်.
အခုတော့သင်တို့သည်ငါတို့၏နိုင်ငံခြားသုံးငွေငွေကြေး Converter Tools များအကြောင်းကိုအထဲကရှာတွေ့နှင့်သင့်ငွေကြေးကိုမှပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းသည်အဘယ်သို့သောအကြောင်း, အကြှနျုပျတို့သညျလညျးထိုအကောင်းဆုံးနှင့်စျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေစျေးနှုန်းများရဖို့သိသင့်ယုံကြည်ပါတယ် – သငျသညျမှာသင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေမိန့်သငျ့သညျ တစ်ဦးကရထား Save.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုဒီစာမျက်နှာ embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ်: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcurrency%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)